1BR bluewhite SUITE w POOL, IJIMU & TT nr Baga BEACH - I-Airbnb
1BR bluewhite SUITE w POOL, IJIMU & TT nr Baga BEACH
Arpora, Goa, i-India
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Vishal
U-Vishal Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elithokomele nelivulekile elinendawo yokubhukuda e-Arpora (cishe imizuzu engu-5 uhamba ngemoto noma ugibela ukuya e-Baga) . Itholakala endaweni eyinhloko e-North Goa futhi isondelene namabhishi amakhulu afana ne-Calangute, i-Baga njll. leli fulethi lilungele iqembu labangu-4 futhi linawo wonke amasevisi adingekayo anjenge-pool yokubhukuda, i-Gym, igumbi lomsebenzi, Ukupaka njll.
Leli Fulethi & umphakathi wonke usekuqaphelweni kwe-cctv.
* * SICELA UFUNDE NGEZANSI MAYELANA NENDAWO YOKUBHUKUDA * *
Ifulethi elithokomele nelivulekile elinendawo yokubhukuda e-Arpora (cishe imizuzu engu-5 ukuya e-Baga) . Itholakala endaweni eyinhloko e-North Goa futhi isondelene namabhishi amakhulu afana ne-Calangute, i-Baga njll. leli fulethi lilungele iqembu labangu-4 futhi linawo wonke amasevisi adingekayo anjenge-pool yokubhukuda, i-Gym, igumbi lomsebenzi, Ukupaka njll.
Leli fulethi lisesitezi sesithathu futhi lingasetshenziswa ngezitebhisi nangezitebhisi. Le ndawo ivikeleke ngokugcwele ngokuphepha kwamahora angu-24.
Ifulethi linendawo yokuhlala enekhishi elinakho konke kanye nekamelo elinendlu yokugezela efakiwe.
Ukuhlanza kuzokwenziwa nsuku zonke
Amashidi azoshintshwa njalo ngezinye izinsuku
Amathawula azoshintshwa nsuku zonke.
Isidlo sasekuseni sizonikezwa nsuku zonke phakathi kuka-8-11am ngesicelo futhi ngemali eyengeziwe engu-Rs250 umuntu ngamunye ubusuku ngabunye. Isidlo sasekuseni kufanele sibhukhwe kusengaphambili (okungenani ngobusuku obudlule)
Leli Fulethi linekhamera esangweni elingaphambili nekhamera kuvulandi ukuze kuphephe futhi kube nesisekelo sokuphepha
futhi umphakathi wonke
ekuqaphelweni kwe-cctv Phawula- INDAWO YOKUBHUKUDA izovalwa KUSUKELA NGOMHLA KA-1 MASHI 2020 KUZE KUBE ESINYE ISAZISO SOKUGCINA
Sitholakala endaweni enhle ye-resort cishe ama-2kms ukusuka ebhishi lase-Baga.
Amabhishi afana ne-Calangute, i-vagator, i-Anjuna njll asebangeni elingaba ngu-1-2kms endaweni.
Izindawo zokudlela ze-Muticu, izitolo zokuthenga ukudla, izibhedlela, inxanxathela yezitolo zedolobha, i-Atms njll zingaphansi kwendawo engu-0.5 -2 kms.
I-Panjim city and mapusa city usithatha cishe ama-8kms kude.
IBANGA LE-APROXE UKUSUKA E-VILLA
I-Panjim - 10 km
02Ř Candolim - 3 kms
Anjuna - Atlan km
Vagator - 08
km I-Morjim - 19 km
Mapusa - 10
km I-Dona publa -
18km Old Goa - 20km
Isikhumulo sezindiza- ISITESHI SESITIMELA esingu-45km:-
I-Thivim - 22km Karmali - 21km Vasco - 45km Madgaon - 55km ISITOBHI SEBHASI:- Calangute: 300 Meters
I-Panjim - 10km
Mapusa - 10km IZINDAWO ZOKUDLELA :-
I-Resort Bar and Restaurant - 10 Meters
I-Cury Leave (Veg) - 300 Meters
Ukuthintitha Ibhishi - Amamitha angu-200
INDAWO YENKOLO:- Ithempeli -
800km Mosque -10 km
Ithempeli le-Jain - 10 km
IBHISHI: - I-Calangute BEACH:
Ibhishi lase-Baga: 04km Candolim Beach :
Ibhishi lase-Anjuna: 09 km
I-Vagator Beach : 10km
Morjim Beach: 18km I-Miramar Beach : 13km
08km I-Pride 1 - 10km
I-Pride 2 - 10km
08km I-Chancesasino - 18km INXANXATHELA YEZITOLO :- MALL
De Goa - 08km
02km Cacullo Mall -
14km ISITOLO ESIKHULU nezitolo zewayini:- Newton Supermarket & WINE
- 500 Meters
inox Porvorim - Imperkm
I-Panjim - 13km
- IHMCT & AN
- 09KM I-Ann Institute :
esingu-08km: Isibhedlela i-Dukle - 700 Meters
Isibhedlela i-Chodankar - 08 km
i-RG Hospita - 09km Isibhedlela i-Mandovi - 10km
Isikhungo Sezempilo sikaHulumeni
- 02km Isibhedlela i-GMC -
16km Manipal Hospital- 18km
I am Vishal a local Goan and a traveller. Love travelling, Hosting, food and meeting people from different backgrounds of life. Now on Airbnb to meet and host guests from all around the world.
Ngizoba khona ukuze ngisize futhi ngiqondise izivakashi zami uma kudingeka. Siphinde sibe nomphathi ozoqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle.
UVishal Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Arpora namaphethelo